October 25, 2021 - Khitalin Media
တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ ရဲ့ ယနေ့တင်ထားတဲ့ ပိုစ်တစ်ခုက အရမ်းကို သနားမိသလို ကြေကွဲရပြန်ပြီကွယ်
October 25, 2021 by Khitalin Media
တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ ရဲ့ ယနေ့တင်ထားတဲ့ ပိုစ်တစ်ခုက အရမ်းကို သနားမိသလို ကြေကွဲရပြန်ပြီကွယ် ပရိတ် သတ်ကြီး အလှမယ်လေး ခင်ဝင့်ဝါ ဆိုတာနဲ့ အားလုံးချစ်ခင် အားပေးရတဲ့ အနု ပညာရှင်လေး တစ်ဦးဆိုတာ သိပြီးဖြစ် မှ ာပါ လတ်တလော နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မူတွေကြောင့် လွတ်မြောက်ရောက်ကို တိမ်းရှောင်နေကြ ရတဲ့ အနုပညာ များထဲမှာ မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါ လည်း အပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ် ။ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ အမှန်တရား ဘက်က ရပ်တည် ခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ် အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး ခန္ဓာကိုယ်သေးသေး နွယ်နွယ်လေးနဲ့ ချစ်စ ရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမူ ရာလေးတွေကြောင့် လက်ဖျားနဲ့တောင် တိုးရက် စရာမရှိပါ ဘူးခုဆိုရင် နုနုနယ်နယ် မင်းသမီးချောလေးက ကိုယ့်ကို … Read more
မိန်းမတိုင်း ရွံတဲ့ ယောင်္ကျား
မိန်းမတိုင်း ရွံတဲ့ ယောင်္ကျား မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ ယှဉ်ရန်ဖြစ်သော ယောကျာ်း။ ~မိန်းကလေးတယောက်ကို ဆဲတတ်၊ အော်တတ် ၊လက်ပါ တတ်သော ယောကျာ်း။ ~မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ အားနည်းချက် ကို အနိုင်ယူ တတ်သော ယောကျာ်း။ ~မိန်းမ တကာ နဲ့ အရောတဝင်၊ မိန်းမ တကာကို အပျော်ကြံတဲ့ ယောကျာ်း။ ~မိန်းမတိုင်း ကို တဏှာ မျက်စိနဲ့ ကြည့် တတ်သော ယောကျာ်း။ ~ကိုယ့်ကို ကို ဂုဏ်ဖော်၊ အထင်ကြီးပြီး မာန်တက်နေသော ယောကျာ်း။ ~မိန်းကလေးတယောက်အပေါ် အမြဲအနိုင် ယူတတ်သော ယောကျာ်း။ ~ ပေးထားတဲ့ ကတိ ၊ပြောထားတဲ့ စကား မတည်သော ယောကျာ်း။ ~ အပြောနဲ့ အလုပ်မညီ ၊ ပြီးပြီးရော … Read more
(ဖတ်ဖူးတာကြာခဲ့ပေမဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့သင်္ခန်းစာလေးပါ) အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း
(ဖတ်ဖူးတာကြာခဲ့ပေမဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့သင်္ခန်းစာလေးပါ) အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း အမျိုးသား – ကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရူးရူးမူးမူး ချစ်မိနေတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အတိုင်ပင်ခံ – ဒီမိန်းကလေးဟာ သင့်ဘဝအတွက် နောက်ဆုံး ချစ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ သင်သေချာလား။ အမျိုးသား – ဟုတ်ပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံ – ကွာရှင်းပြီး ခုမင်းချစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ယူလိုက်။ အမျိုးသား – ဒါပေမဲ့ ခုလက်ရှိမိန်းမက နားလည်ပေးတယ် သည်းခံတယ် တော်တယ်။ကျွန်တော်ဒီလို လုပ်ရင် သူ့အတွက် ရက်စက်ရာကျမလား။ အတိုင်ပင်ခံ – အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ တရားတယ် ရက်စက်တယ်လို့ ဆိုတာတွေ မရှိပါဘူး။ ခုမင်းချစ်နေတာက တခြားမိန်းကလေးဖြစ်နေပြီ။ အမျိုးသား – ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်တာ။ အတိုင်ပင်ခံ – ဒါဆို … Read more
အရပ် (၅)ပေ မပြည့်တပြည့် မိန်းကလေးတွေပဲ ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခွင့်ရှိမယ့် အားသာချက် (၇)မျိုး
အရပ် (၅)ပေ မပြည့်တပြည့် မိန်းကလေးတွေပဲ ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခွင့်ရှိမယ့် အားသာချက် (၇)မျိုး အရပ် (၅)ပေ မပြည့်တပြည့်နဲ့ ကောင်မလေးတွေလောက် ချစ်စရာကောင်းတာ မရှိဘူးလို့ ပြောရင် ငြင်းမှာလား။ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ငြင်းငြင်း သူတို့လေးတွေသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ အားသာချက်လေးတွေ ကတော့ ဒီလိုလေးတွေ ရှိပါတယ်နော်။ (၁) ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ပိုနုတယ် ရွယ်တူတွေကသာ အသက်တွေ ကြီးသွားတာ ကိုယ်တွေကတော့ တက်လာသမျှ သလေးတွေနဲ့ ယှဉ်လို့ ရနေတုန်း ။ (၂) အဝတ်အစားအတွက် အကုန်အကျ သက်သာတယ် အဝတ်အစား ဝယ်တဲ့အခါ small size က ဈေးအနည်းဆုံး ဖြစ်သလို၊ ချုပ် ဝတ်မယ် ဆိုရင်လည်း ပိတ်စတွေ အများကြီး မကုန်ပါဘူးနော် … Read more
သင် လူရွေးမှားနေပြီဟု သိသာစေနိုင်သော အချက်လေးများ
သင် လူရွေးမှားနေပြီဟု သိသာစေနိုင်သော အချက်လေးများ ချစ်သူ ရွေးကြတဲ့အခါ ဘယ်လို စံနှုန်းတွေနဲ့ ရွေးကြမှာလဲ။ တစ်ယောက်ချင်း စီရဲ့ ideal type တွေက မတူကြပေမဲ့ အချစ်ရေး ကံကောင်းချင်ကြတာကတော့ လူတိုင်းပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) သင်လုပ်သမျှအရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်တတ်တယ် သင်ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစား ပုံံစံကအစ၊ သင်ရွေးချယ်တဲ့ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်အလယ်၊ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ဆိုင်တာတွေအဆုံး … သူ့အမြင်မှာ အပြစ်တင်စရာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်နေတတ်တယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ လူရွေးမမှားဘူး ဆိုရင်တောင် မှန်တော့ မမှန်ပါဘူးလို့ ပြောရ မှာပါ။ (၂) စကားပြောမှားသွားမှာအမြဲစိုးရိမ်နေရတယ် … Read more
စန်းပွင့်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်စန်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ အလုပ်မှာနေရာရတာ၊ လူချစ်လူခင်များတာ ၊ အချစ်ရေး ကံကောင်းတာ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး စန်းကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Monica က ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဒါက အချစ်ရေး တစ်ခုမှာဘဲ မဟုတ်ဘဲ အဘက်ဘက်မှာ အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ 1. ၿပဳံးပါ။ ရုပ်ကိုတည်တည်ကြီး မနေဘဲ လူရှေ့သူရှေ့ရောက်ရင် ပြုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ရုပ်တည်နဲ့ လှတဲ့ သူဆိုတာ ရှားလို့ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုံးတွေကို သူများကို ပေးဖို့ မနှမြောပါနဲ့နော်။ ဒီလိုလေး ပြုံးနေရင် လူကြီးတွေက အစ သဘောကျကြပါတယ်။ 2. ချိုသာပါ။ လူအများကြားထဲမှာ ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင် နေပါ။ ရှိသင့်တဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို စောင့်ထိန်းပါ။ … Read more